Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa Mpanao Gazety Lalao Zava-Mahadomelina Vs. Namana Orinasa, The Checkout Fialam-Boly Orinasa, Vaovao News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina
Fomba 8 hitsaboana ny aretin-tsaina amin'ny vanim-potoana
Rehefa mitsoka tsy mijanona ianao dia mila fanamaivanana ny allergy, ary haingana! Atambaro ireo fanafody voajanahary ireo ho an'ny allergy amam-potoana sy ny fanafody mba hahatsapa ho salama haingana kokoa.
Mihevitra ny fanafody ADHD? Ny torolàlana ho an'ny fitsaboana ADHD olon-dehibe
ADHD olon-dehibe dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny fahasambarana ao an-trano. Ny manam-pahaizana momba ny aretin-tsaina dia manazava ny fototry ny fitsaboana ADHD olon-dehibe sy ny safidy fitsaboana.
Fanafody ADHD sy ny ankizy
Fampahalalana momba ny fanafody ADHD mahazatra, ny zavatra ataony, ny fomba ampiasana azy, ny fomba fitantanana ny voka-dratsy, miampy ny torohevitra momba ny fitantanana fanafody ADHD mahomby.
Eny, afaka mihombo ny allergy rehefa olon-dehibe
Ny aretin-tontolo iainana sy ny sakafo dia mety hivoatra aorian'ny fiainana. Ity misy fomba fitsaboana alikaola ateraky ny olon-dehibe isaky ny maniry.
Angano 6 sy fiheveran-diso diso ADHD
ADHD dia iray amin'ireo toe-javatra neurodevelopmental mahazatra indrindra amin'ny ankizy, ary iray amin'ireo diso fandray indrindra. Lavao ireo angano ADHD ireo amin'ny zava-misy ADHD.
Milamina ve raha atambatra ny alikaola sy ny insuline?
Raha mampiasa insuline hitantanana diabeta ianao dia mety mbola afaka misotro alikaola indraindray. Fa miresaha amin'ny dokotera mba hiarovanao tena.
Azo antoka ve ny mampifangaro alikaola amin'ny fanafody heartster?
Ny alikaola dia mety miteraka alahelo, saingy azo antoka ve ny mampifangaro antacid sy alikaola? Mianara bebe kokoa momba ny fifampiraharahana eo anelanelan'ny fanafody heartburn toy ny Pepcid sy ny alikaola.
Azo antoka ve ny misotro zava-pisotro misy alikaola raha mandray fanafody fanampiana amin'ny torimaso?
Inona no mitranga rehefa mifangaro alikaola sy pilina natory ianao? Afaka mijanona tsy miaina ianao. Ny ambien sy ny alikaola dia mety mamono anao. Hahafantatra bebe kokoa momba ny cocktail mampidi-doza eto.
Efa nanenjika Xanax iray vera misy divay ve ianao? Toa mahazatra izany, saingy ahiana be ny risika rehefa mifangaro alikaola sy benzodiazepine.
Inona no tena mahatonga azy ho rononon-dreny?
Arakaraka. Azo antoka ny mihinana fanafody be dia be — nefa tsy ny rehetra— rehefa mampinono. Ny fikarohana momba ny alikaola sy ny fampinonoana dia mifanohitra.
Afaka misotro alikaola amin'ny antibiotika ve ianao?
Tokony hiandry ve ianao mandra-pahatapitry ny antibiotika fisotro toaka anao? Nanazava izay tokony ho fantatrao momba ny antibiotika sy ny alikaola ireo manam-pahaizana anay.
Fanalavirana ny 'September Spike' soritr'aretin'ny allergy sy ny asma
Misy fiakarana tampoka amin'ny allergy sy ny asthma fanafihana rehefa miverina mianatra ny ankizy. Halaviro ny fitomboan'ny soritr'aretina septambra amin'ireo fisorohana ireo.
Torohevitra 5 amin'ny fikirakirana ny allergy hanina amin'ny zanakao amin'ny Halloween
Ny fitsaboana Halloween dia mety hampidi-doza ho an'ny ankizy tsy mahazaka sakafo. Ampiasao ireto torohevitra ireto — manomboka amin'ny vatomamy tsy misy alerà ka hatrany amin'ny voatavo tealy — amin'ny fialantsasatra azo antoka.
Ny torolalana anao amin'ny fihinanana fanafody allergy mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fitondrana vohoka dia mety hahatonga ny soritr'aretin'ny alika ho ratsy kokoa, saingy tsy azo antoka ny mihinana fanafody allergy rehetra rehefa bevohoka. Andramo aloha ny fitsaboana voajanahary, avy eo ireo safidy ireo.
Rahoviana no tokony hizaha toetra ny zanakao ianao
Manakaiky ny antsasaky ny ankizy mianatra dia mora tohina amin'ny Allergen mahazatra, saingy tsy ilaina foana ny fitsapana ny allergy. Ianaro hoe rahoviana, amin'ny fomba ahoana, ary iza no afaka hitsapana.
Miasa ve ny tifitra allergy? Mendrika ve izy ireo?
Manome 3-5 taona mahery isan-kerinandro, mitifitra fotoana ny mitaky allergy. Na izany aza, afaka mahomby hatramin'ny 85% izy ireo. Mandanja ny tombony sy ny lafy ratsy eto.
Anorexia vs. bulimia: Antony, soritr'aretina, fitsaboana
Inona no maha samy hafa ny Anorexia vs. bulimia? Ampitahao ny fahasamihafana eo amin'ny diagnostika, ny fitsaboana ary ny fisorohana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny bulimia.
Antibiotika 8 izay mahatonga an'i C.Diff
Omena fanafihana voalohany ny olona rehefa marary izy ireo. Saingy, mety hahatonga azy ireo harary kokoa izy ireo, rehefa manafika ny bibikely toa an'i C.diff.
Ny zavatra tokony ho fantatry ny reny mitaiza momba ny antidepressants sy ny fampinonoana
Zava-dehibe ny fikarohan'ireo reny mitaiza izay misedra soritr'aretin'ny fahaketrahana - ity no tokony ho fantatr'izy ireo raha toa ka mihinana fanafody izy ireo.
Ahoana ny fomba fihinanana antibiotika azo antoka mandritra ny fitondrana vohoka
Ny tombony azo avy amin'ny fihinanana antibiotika mandritra ny fitondrana vohoka dia be lavitra noho ny loza ateraky ny aretina mikraoba tsy voatsabo. Ireto misy antibiotika azo antoka mandritra ny fitondrana vohoka.
ohatrinona ny vitamina d tokony ho raisin'olona
inona ny voka-dratsin'ny tsiranoka orona afrin
ahoana no ahafantaranao raha miasa ny plan b
inona ny aretina mandeha ankehitriny
mandra-pahoviana no maharitra hatsiaka ny loha?
ahoana no hahalalana raha miasa ny plan b